ကြောင်းကျိုးဆိုတာ ဒီလိုလား?.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ကြောင်းကျိုးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
Posted by Ko out of... on Mar 8, 2012 in Think Different | 14 comments
တခါက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အကြောင်းအကျိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေနွေးကြရာ…
ပထမလူ ။ အကြောင်းအကျိုးဆိုတာမင်းသိလား…
ဒုတိယလူ ။ သိတာပေါ့…
ပထမလူ ။ ပြောပါဦး…
ဒုတိယလူ ။ မင်းငါ့ကိုထိုးတာ အကြောင်း၊မင်းကို ငါပြန်ထိုးလို့ မင်းပါးရောင်တာ အကျိုးပေါ့ကွ…
ပထမလူ ။ မင်းရော ဘယ်လိုနားလည်လဲ…
ဒုတိယလူ ။ ဒီလိုကွ နွားက ပိုင်ရှင်ကို ခဏခဏကန်တော့ ပိုင်ရှင်က တုတ်နဲ့ ရိုက်တယ်။ ဒီလိုတုတ်နဲ့ခဏခဏ ရိုက်တော့ နွားကမှတ်မိသွားတယ်။ နောက်ပိုင်း ပိုင်ရှင်က အနားဖြတ်လာရင် ခြေထောက်နဲ့ မကန်ရဲတော့ဘူး။
ခြေထောက်နဲ့ ကန်တာက အကြောင်း ပိုင်ရှင်တုတ်နဲ့ အရိုက်ခံ လိုက်ရတာအကျိုးပေါ့ကွ လို့ဆိုလိုက်တယ်. .
ပြောချင်တာ ဒီအကြောင်းအကျိုးလောက်တော့ လူတိုင်းသိတယ်..တိရိစ္ဆာန်တွေကျွဲနွား တွေတောင်သိတယ် လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။ ဘုရားပြောတဲ့ အကြောင်းအကျိုးဆိုတာ ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ စဉ်းစားလို့ရအောင် နာယူမှတ်သားဖူးခဲ့ရတဲ့ ဥပမာလေး နဲ့တင်ပြပါရစေ…သစ်ပင်ဟာ သစ်စေ့ကနေပေါက်ဖွါးလာတဲ့ အကျိုးဆိုရင် သစ်ပင်ဟာ သစ်သီး ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းပေါ့ အရာတစ်ခုတည်းမှာပင် အကြောင်းအကျိုးရှိနေတယ်။ သစ်ပင်ဟာသစ်စေ့ ကနေ ရင့်ကျက်လာတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ဘဲ ဘယ်နေရာမှ မရွှေ့ဘူး၊ ကာလအကြာကြီးလည်း မခြားဘူး။ အရိပ်ဟာ ကိုယ့်နောက်ကို ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်နေမည် ဆိုရင် အရိပ်တခြား လူတခြား မဟုတ်ပါဘူး။ အခုချက်ချင်း အရိပ်ပေါ်ပါတယ်။ ၀ါးပင်ဟာ မြစ်ကနေ ရင့်ကျက်လာတဲ့အသွင်ဘဲ…ကာလမခြားဘူး…
ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ကိလေသာဟာ တချိန်က၀ိပါက်ကြွင်းခဲ့လို့ဖြစ်တာ.. ဒါဆိုဝိပါက်က အကြောင်း ပြုလုပ်ချင်တဲ့ကိလေသာ အကျိုး.. ၀ိပါက်ဟာ တချိန်က ကံလွန်ကျူးခဲ့လို့ ဖြစ်တယ် ဒါဆို ၀ိပါက်ဟာ အကျိုးပြန်ဖြစ်ပြီး ကံဟာ အကြောင်းခံပြန်ဖြစ်တယ် လို့ပြောရပါတယ်..
ပြုလုပ်ချင်တာ(ကိလေသာ)၊ ပြုလုပ်တာ(ကံ)၊ ပြုလုပ်သူဖြစ်တာ(၀ိပါက်)ကိလေသာ၊ကံ၊၀ိပါက် တွေဟာ တခုကိုတခု ထောက်ပြီး (သစ်ပင်၊သစ်သီး၊သစ်စေ့) အကြောင်းအကျိုး တွေဟာတခုကိုတခု အကြောင်းသည်ပင်လျှင်အကျိုး၊ အကျိုးသည်ပင်လျှင် အကြောင်း ဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။ဒါတွေဟာ ဘယ်သူက စဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး။ ဒါကိုဘုရားမပွင့်ရင် ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ဘုရားက ဒီဝဋ်သုံးပါး သံသရာကလွတ်မြောက်သူဘဲ။ ဘုရားက ဒါကိုစဖေါ်ထုတ်ပေးသူဘဲ…
– ခံစားမှု အကြောင်း အကျိုးဟာ သဘာဝအရ ဘယ်သူမှသင်ပေးစရာ မလိုဘူး..သူ့လက်ဖြတ်လို့ ကိုယ့်လက်ပြန် အဖြတ်ခံရတယ်.. သူဥစ္စာ ခိုးလို့ ကိုယ့်ဥစ္စာ ပြန်အခိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအကျိုးကို ဘုရားမဟောပါဘူး.. ဒါတွေလုပ်နေရဲ့သားနဲ့ ဘာမှမဖြစ်တဲ့ လူတွေကမ္ဘာမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါ..နောက်ဆုံးထောင်ဒဏ်ချအပြစ်ပေးလိုက်လို့ ပြန်ခိုးပြန်သတ်နေကြတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးပါ…ဒီအကြောင်းကျိုးကို သူတို့ပိုသိမယ်ထင်တယ်.. အရိုက်လည်းခံရ အမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်ခံရတာဘဲ..ဒါတွေဟာ ဘုရားဟောတဲ့ အကြောင်းကျိုးမှန်ကို မသိကြလို့ဘဲ…
လောကကြီး အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ တလှံမျှသော ကိုယ်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့ ကိလေသာ၊ကံ၊၀ိပါက် အကြောင်းအကျိုး တခုနဲ့တခုထောက်ပြီး လည်ပတ်နေတာကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ကြပါစေ..သိရှိနားလည်ပြီး လူးသားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ သာယာဝပြောဖို့ တတ်နိုင်သလောက် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ…
အင်း.. အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်တာ။ အကျိုးဖြစ်လို့လည်း အကြောင်းရှိလာတာ။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမှာပါလိမ့်… ကံ ကံ၏အကျိုးတော့ ယုံကြည်မိတယ်။
အကျိုးဖြစ်ခဲ့တာကို သီးသန့်ထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် လွယ်မလားပေါ့..
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ တခုခု ကို လုပ်တယ်ဆိုပါစို့..
ဒီလုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ဟာ..အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီအလုပ်ကြောင့် ကိစ္စ တခုပြီးတယ်..ဒါက အကျိုးပါ..
သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေကလည်း အလုပ် တိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ အစွမ်းကြောင့် အလုပ်တခု
ပြီးတယ် ဆိုတာ လက်ခံထားပါတယ်..
ဒီပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်သင့်တာက
ကျွန်တော်တို့ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။
ဘာလုပ်လုပ် သူ့ရဲ့ အကျိုးကို ရမှာ..
ပြောကြတယ် မဟုတ်လား တူသောအကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီး
ကောင်းတဲ့အလုပ်ကို တူအောင်လုပ်ရင် တူညီတဲ့ ကောင်းကျိုးရမှာပေါ့။
လူတိုင်းကောင်းချင်ရင်တော့ လူတိုင်း ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ပါဘဲ…
ဘယ်ဟာက တကယ်ကောင်းတယ် ဆိုတာ သိဘို့ပါခင်ဗျား…
– ရူပဗေဒ သဘောတရား မှာတော့.. ကျောက်တုံးတစ်တုံး ကို အားအင်ကုန်အောင်ဘယ်လောက် တွန်းနေတွန်းနေ နေရာက မရွေ့လျှင် အလုပ်လုပ်တယ်လို့ မခေါ်ဘူးဆိုတာ လက်ခံထားပါတယ်..
– တူသောအကျိုးပေးဆိုတာ မျက်စိနား နာခေါင်းစသည့် အာရုံခံ အဂါင်္နဲ့ကြည့်လို့ မြင်ရတဲ့ အရာ မျိုးမဟုတ်ပါဘူး…ဥာဏ်နဲ့ ကြည့်မှ မြင်ရတဲ့ အရာပါ..လူမှာ တခြားအကောင် ထက်သာတာဆိုလို့ ဥာဏ်ဘဲ ရှိပါတယ်.. အနှံ့ခံ အာရုံကောင်းတာလည်း ယင်ကောင်၊ ခွေးကောင်တို့ကို မမှီလောက်ဘူး.. လက်အားခြေအား လည်းမျောက်လောက် စွဲအား မကောင်းလောက်ဘူး..စဉ်းစား စရာလေးပါ..ဆူနာမီဖြစ်တုံးက အကောင်ပလောင်တွေသိပ်မသေကြဘူးလို့ ပညာရှင်တွေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်…. ငလျှင်လှုပ်ခါနှီး လင်းပိုင်တွေဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းဆန်တက်ပြီး ဖြစ်လာ မည့် အန္တရာယ်ကို ကြိုသိနေကြ သလိုဘဲ…
ကြိုးစားပြီးဖြေ ကြည့်ပေးပါမယ်…ဥပမာ..ကိုယ့်က ဘိန်းရှုတဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်လိုက်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုပါတော့..အဲဒီ အကောင်းဟာ လုပ်ပြီးပေမဲ့ ဒီမှာတင် မပြီးသွားဘူး..၀ိပါက်ဆိုတဲ့ အကျိုးကြွင်းကျန်ခဲ့ပါတယ်..ကြွင်းကျန်ခဲ့တာ ဘယ်လိုလုပ် သိလည်းဆိုရင်.. နောက်ထပ်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ ကိလေသာစိတ်ကို ဖြစ်စေတယ်..ဒါကြောင်းသူက နောက်ထပ် ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြန်ပြုလုပ်..ပြန်လုပ်လို့ ဘိန်းသမားဘ၀ဖြစ်…ဒါကြောင့် ဒီဘိန်းသမားဘ၀ သံသရာ ကမထွက်နိုင်တာ…
ပြုလုပ်ချင်တာ၊ပြုလုပ်တာ၊ပြုလုပ်သူဖြစ်တာဟာ ကာလမခြား(အင်ဂျင်စက်လှည်သလိုပေါ့)တခုကို တခုထောက်ပြီး ဆက်ဖြစ်နေတာ တူသော အကျိုးပေးပေါ့…အခုဘ၀ လုပ်လိုက်လို့ နောင်ဘ၀မှ အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ ကာလ အများကြီးခြားသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက်တူသော အကျိုးပေးလို့ မခေါ်ပါဘူး..တရားဂုဏ်တော် (၆)ပါးနဲ့လည်း မကိုက်ညီပါဘူး..တကယ်လို့ နောက်ဘ၀မှ အကျိုးပေးရင် နောက်ဘ၀မှ အကြွေးဆပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် မိုက်တဲ့ လူတွေအတွက် အခွင့် အရေးပေါ့.. သူတို့လုပ်ရင် သူတို့ခံ လို့ပြောပေမဲ့ မခံရတဲ့ လူတွေတပုံကြီးပါ…တခါတရံ သူများလက်ဖြတ်လို့ ကိုယ့်လက် အဖြတ်ခံရတာ ရှိကောင်းရှိမှာပါ.. ဒါလည်း အပုံတရာပုံ တစ်ပုံလောက်ဘဲ ရှိပါတယ်..ဘုရားဟာ မင်းအဆိပ်ရေ မသောက်နဲ့.. မင်းလက်ကို ဓါးနဲ့ မခုတ်နဲ့ လို့မဟောပါဘူး.. ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ … ခုတ်ရင် ဖြစ်လာမည့် အကျိုးကို လူတိုင်းသိလို့ဘဲ…
နောက် အလုပ်လုပ်တာ အကြောင်း အမြတ်တခုခုရတာ အကျိုးဆိုတာလည်း ဘုရားမဟောဘူး..ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ရင် ရလာဘ်တခုခု ရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိလို့ဘဲ..
ဒါဆို လိမ်တဲ့ ပညာ ခါးပိုက်နှိုက်တဲ့ ပညာကိုသင်တာ အကြောင်း လိမ်နည်းပညာကို တတ်တဲ့ အတွက် သူများပစ္စည်းဥစ္စာ ကိုများများရတာ အကျိုးလို့လည်းပြော လို့ရတယ်…
ဘုရားကတော့ ကာမအကုသိုလ်မှ မလုပ်ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး.. ကာမကုသိုလ်လည်း မလုပ်ကောင်းဘူး.. နောက် ဒီကာမဘဲလား မဟုတ်သေးဘူး ရူပ၊အရူပ လည်းမလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့..ဒါဆို အဆိုးလုပ်လည်းသံသရာလည်..အကောင်းလုပ်လည်း သံသရာလည် ဆိုတော့ နားမလည်နိုင်စရာဘဲ…
တနည်းအားဖြင့် … မစင်ဆိုရင် သူတောင်းစားရဲ့ မစင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်.. ရှင်ဘုရင်ရဲ့ မစင်ဖြစ်ဖြစ် အကုန်နှံမှာ ဘဲလို့ ဘုရား ဥပမာပေးပြီးပြောခဲ့တယ်…ကံဆိုရင် ဘယ်ကံဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့..
ဒါကြောင့် လူတိုင်းသိတဲ့ ကြောင်းကျိုးက တကယ်မငြိမ်းချမ်းဘူး.. ဘုရားဟောတဲ့ ကိလေသာ၊ကံ၊ ၀ိပါက် တခု ကိုတခုထောက်ပြီး လှည်ပတ်နေတဲ့ အကြောင်းအကျိုးကို သိမှ တကယ်လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းသူ ဖြစ်ပါတယ်…
Ko Out Of ရေ…
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သဘောတရားတွေ ပေါ့နော်။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် သဘောတရားတွေ ဆိုတာမှန်ပါတယ်.. ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဟာ ဖြတ်လို့ ရတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါ.. ကိုယ်အရင်ကသိတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟာ ဒုတိယ အကွက်မှာရောက်နေတော့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး…ဝေဒနာ နှင့် တဏှာကြားဖြတ်တယ်ဆိုတာ..ခံစားချက် ဖြတ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါ …အခုကမဟုတ်ပါဘူး.. သိလိုက်တာနဲ့ အလင်းရလိုက်တာနဲ့ အမှောင်ပျောက်ပါတယ်.. ပထမအကွက်ကနေသိအောင်လုပ်ပြီးဖြတ်ရတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပါ…
ဟုတ်တယ် နော် .. အရာရာဟာ အကြောင်းနဲ့ အကျိုး ဆိုတာရှိတယ် .. .
hite ဘာမှလည်း မပြောဘဲ negative နီနီ ကြီးပေါ်နေပါတယ် .. eeeeee
တချို့သောမေးခွန်းတွေဟာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အထဲမှာ အဖြေပါပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆထားလို့ ပြန်မဖြေကြား ပေးရတာ…ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပါနော်..
ကိုးကွယ်လဲလျောင်းရာဖြစ်တယ်မိမိဘ၀အကောင်းအဆိုးတို့ ရဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်..။
မင်္ဂလာပါ aye.kk …
နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလို့ရအောင် မှတ်သားဖူးတာလေးနဲ့ ပြန်ဝေဋ္ဌ ပေးလိုက်ပါတယ်…
-အဘိဓမ္မာ မှာကတော့.. ကာမာဝစရစိတ်၊ ရူပါဝစရစိတ်၊ အ၇ူပါဝစရစိတ်၊ လောကုတ္တရာစိတ် လေးမျိုးရှိတယ် လို့ မှတ်သားဖူးတယ်..
– တချို့ ဖတ်ဖူးတာကျတော့ ကာမအကုသိုလ်၊ ကာမကုသိုလ်၊ ရူပကုသိုလ်ကံ ၊အရူပကုသိုလ်ကံ ဆိုပြီး ဒါကံ ကို သရုပ်အနေနဲ့ပြောရင်ပေါ့..သင်္ခါရ အနေနဲ့ ကျတော… ကာမအကုသိုလ်ကံ သင်္ခါရ၊ ကာမကုသိုလ်ကံ င်္သခါရ၊ရူပ ကုသိုလ်ကံ အဘိသင်္ခါရ၊ အ၇ူပ ကုသိုလ်ကံ အဘိသင်္ခါရ ဒီလေးမျိုးကို မမှီဝဲ ရဘူးလို့ ဘုရာဟော ထားတာလည်းဖတ်ရဖူးတယ်…
– ဒါကြောင့် ကုသိုလ်စိတ်၊အကုသိုလ်စိတ်၊၀ိပါတ်စိတ်၊ကြိယာစိတ် ဆိုတာ..ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး.. အဟိတ်စိတ် (၁၈)ပါးမှာ အကုသလ၀ိပါက်စိတ် ၇ပါး.. အဟိတ်ကုသဘလ၀ိပါက် ၈ပါး.. အဟိတ်ကြီယာစိတ် ၃ပါး ..ဆိုတာလည်း အဘိဓမ္မာ မှာဆိုထားပြန်တယ်.. ကြိယာစိတ်ကို ဘုရား၊ရဟန္တာမှာဘဲ ဖြစ်ကောင်းတယ် ကျန်တဲ့လူ မဖြစ်ကောင်းဘူး ဆိုတာလည်း ပြောတာကြားဖူးတယ်..
တချို့ကျတော့ ပြုလုပ်တိုင်းကံ မမြောက်တာ ကြိယာစိတ်တွေဘဲ…
အဘိဓမ္မာ မှာကတော့ ပရမတ္တ တရား (၄)ပါးဆိုတာ မှတ်သားခဲ့ ဖူးပါတယ်…
စိတ်၊ စေတသိတ်၊ရုပ်၊ နိဗာန် လေးမျိုးရှိတယ်တဲ့ .ဒါဆို သတ္တိဆိုတာ ရုပ်ထဲမှာထဲ့မလား? စိတ်ထဲမှာထဲ့မလား? စေတသိတ်ထဲမှာ ထဲ့ မလား? နိဗာန်မဟုတ်တာကတော့ သေချာတယ်..
တချို့ကျတော့.. ဒီလေးပါးအပြင် သတ္တိဆိုတာကို ထည့်ပေါင်းပြီး (၅)ပါးထပ် လုပ်မလား?
စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ စေတသိတ် ဆိုတာလည်း စိတ်နဲ့ အတူဖြစ်…စိတ်နဲ့ အတူချုပ်..စိတ်နှင့်တူသော အာရုံရှိခြင်း..စိတ်နှင့်တူသောမှီရာဝတ္တုရှိခြင်း လို့အဘိဓမ္မာမှာ တွေ့ဖူးတယ်… ဒါဆို သတ္တိတခြား ရုပ်တခြားလား မေးစရာရှိတယ်.. ဥပမာ..ဆားငံတယ်ဆိုတာ ငံတာတခြား ဆားကတခြား အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး?..ငံတာ ဆားရှိမှငံတယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်…ဒါကြောင့် နောက်ဘ၀ ကူးတာ သတ္တိ လို့ပြောရလောက်အောင်..အထက်ပါ ဆား ဥပမာလေးနဲ့ စဉ်စားနိုင်ပါစေ..
ုko out of..ရေ
ယေ ဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘ၀ါ, တေသံ ဟေတုံ တထာဂတော အာဟ။
တေသဉ္စ ယော နိရောဓော၊ ဧ၀ံဝါဒီ မဟာသမဏော။
အကြင်တရားတို့သည် အကြောင်းကိုမှီ၍ ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုအကြောင်းတရားတို့ကို လည်းကောင်း, ထိုတရားတို့ ချုပ်ခြင်းကို လည်းကောင်း တထာဂတသည် ဟောတော်မူ၏။ ရဟန်းမြတ်သည် ဤသို့အယူရှိ၏။
ဗုဒ္ဓ၏ လက်ယာတော်ရံမထေရ် ဖြစ်လာမည့် အရှင်သာရိပုတ္တရာပရိဗိုဇ်အား ပဉ္စ၀ဂီငါးပါးအနက်မှ တစ်ပါးဖြစ်သော အရှင်အဿဇိမထေရ် အကျဉ်းဟောကြားသော ဂါထာဖြစ်သည်။
လူသတ်လို့.. လူသေသွားရင်.. လူသတ်တဲ့အကြောင်းကြောင့် လူသေတဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောမယ်..
အဲဒီလူသတ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်..ကိုယ်က နောက်ဘ၀မှာ.. ပြန်အသတ်ခံရတဲ့.. အကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို.. လက်မခံဘူး..
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်းကို.. တခြားသူဆီသွားမလှည့်ဘူး..။ လက်ရှိကိုယ့်ဆီမှာပဲလှည့်မယ်..။
အဲဒီကိုယ့်ဆီမှာလှည့်/လည်နေတဲ့.. သံသရာဘ၀စက်ဝိုင်းအကြောင်းသိတော်မူတာ.. ဗုဒ္ဓလို့ ပြောမယ်..။
တရားတွေကို..တဆင့် ပြန်လှန်ဟောပြောရှင်းပြသူကို.. ရဟန်းလို့နားလည်ထားတယ်..။
ကြောင်းကျိုး တို့ အဖြစ်အပျက်တို့ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်…အဖြစ်ပျက်ဆိုတာလည်း နိုင်ငံရေး အဖြစ်အပျက်၊ စီးပွါးရေး အဖြစ်အပျက်.. စသည်ဖြစ်ပေါ့..ကြောင်းကျိုးဆိုတာလည်း အကျိုးတရားတွေ များများရအောင် ဘယ်လို အကြောင်းတရားတွေရှာရမယ်…အသက်ရှည်ရှည်နေရအောင် ဆိုတဲ့ အကျိုးကိုလို ချင်ရင် ကျန်းမားရေး ကောင်းအောင်ဘယ်လို အကြောင်းတရားရှိရမယ်ဆို တာတွေလည်း အကြောင်းကျိုးတွေပါ… ဘုရားဆိုလိုတဲ့ အကြောင်းကျိုး ကို ဘယ်လိုနားလည်းရမယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုမယ်ထင်တယ်..ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ ဘုရာဟာသူ့ကို အလုံးစုံသိသူသဗေညုတလို့တာ ငါ့ကိုစွပ်စွဲတာဘဲ..ငါကိုတေ၀ိဇာ ငါသိတာ သုံးခုဘဲရှိတယ်လို့ ပြောတာလည်းကြားဖူးလို့ပါ… ဒါကြောင့် ရှိသမျ အကြောင်းကျိုး အားလုံးဖြစ်ပျက်အားလုံး ကို ဘုရားဟောတဲ့ တရားချည်းချည်းဘဲလို့ သတ်မှတ်ရင်.. တိကျသေချုာစွာ ချပြနိုင်တဲ့ သိပံပညာ တွေဟာ ရုပ်ဝတ္တုတွေကို အသေးဆုံးရှာဖွေနိုင်လို့ အမျိုးမျိုး ခိုင်းစားနိုင်တာလည်း အကြောင်းကျိုးကို နားလည်ကြ လို့ပါဘဲ…ဒါဆို ဒီသိပံပညာရှင်တွေ ဘုရားဖြစ်ပြီလား?..ဘုရားဟာ လောကမှာရှိသမျှအရာ အားလုံးကို ညွှန်ကြားပြသသူလား?
လူတွေဘယ်လိုနေရင် ပဋိပက္ခ ကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြသူလား? ….ကျွန်တော်တို့ ထပ်ပြီး ဖြန့် ကျက်တွေးခေါ်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်…
ဆရာတော်တပါးဟောတာ မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါတယ်.. ဗုဒ္ဒတရားဟာ Believe system..
pray system မဟုတ် way of life လို့ဟောထားပါတယ်…